Jen. Yuusuf Indha Cadde “Ciidamada waxey ka gadoodeen hadalkii R/Wasaare Kheyre” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Jen. Yuusuf Indha Cadde “Ciidamada waxey ka gadoodeen hadalkii R/Wasaare Kheyre”
Mar 21, 2019 - 8 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Jen. Yuusuf Maxamed Siyaad Indha Cadde ayaa ka hadlay mushaar la’aanta dhowr bil heysata Qaar kamid ah Ciidanka xoogga dalka, taasoo sababtay inay isaga soo baxaan Saldhigyo ay ku lahaayeen Labada Shabeelle.
Hadalka dowladdu waxa waaye.
Ciidanka dowlada hal dhinac ayaa u badan sidaas daradeed waa in mushaarka laga goyaa si ay u kala tagaan.
Su.aashu waxaa waaye ciidanka gedo kismaayo difaaca uga jiro miyeysan hal dhinac aheyn. Mise habar yoonis iyo Reer mataan ayaa ku jiro.
Wadankii daanyeerada iga dheh.
Hadalka raysalwaaruhu wuxu ahaa ciidama Amison mushaharkoodi way heleen ilayn ayaa isaga ciidan u ahe
ciidamada soomaaliyeed xisaabtaba uguma jiraan
Somaliya si dhib yar u soo noqonmayso.Hadaad moodayso in Somaliya iyo dawladnimadii si dhib yar lagu soo celinayo waad qaldan tahay.
Wixii abuurmay burburkii ka dib ayaa u baahan in la sifeeyo.Kooxaha danaha isku bahaystay ayaa u baahan in laga adkaado.Dhaqanka siyaasada ee maaanta jira ayaa u baahan in laga adkaado.
Si loo gaadho guusha saxda ah waa in wax badan oo ka jira Somaliya laga taqaluso.
Ciidanbaa meel ka baxay,qaraxbaa dhacay,huteelbaa la qarxiyay.Ciidanbaa gadooday,odaybaa la toogtay iyo waxaa hadaad maqasho ha yaabin.
Wali maad maqasheen qarax ka dhacay huteel ku yaal Muqdisho oo uu ku dhintay ninkii Huteelka lahaa?
Waa sax in ciidanka la diiwaan galiyo oo meel lagu ogaado.
Si taasi loo gaadho waa wax badan ay dhacaan.Dadkii ku shaqaysan jiray ciidan beenta ah ayaa taasi diidan.
Waa la gaadhi doodaan guusha.Daddaal ayaa jira.
Meeshu maaha meel layska qayilo oo Maleeshiya qaaqaawan lagu sheego ciidan qaran kkkkkk
Warkaada waxaa ku jirtey,
— Wali ma aragteen Hotel la qarxiyey oo ninkii lahaa ku jirey??
1. Hotel SAXAFI waxaa ku dhintey Mulkiilihii lahaa – C/Rashiid ilqeyte, iyo Amaanduulihii Ciidamada Gen. Dhago-badan
2. Hotel Saxafi waxaa marlabaad la qarxiyey markii laga soo laabtey Xajkii Dhawaa – Waxaa ku dhintey Wiilkii cidda u weynaa ee hotelka wadey, – Waliba asagoo Xajka ka keenay hooyadiis.
– Meeshaas Islaan ina adeertaa ah ayaa ku nin weyday, kuna wiil weyday – miyey kaa mudantahey inaad dhahdo “” Adigaa Qarxiyey ninkaadii iyo Wiilkaadi.
– Nin war hayo hakuu waramo ( Acc- Ali Zubeer ).
Aaadbaad ugu mahadsan tahay warkaa aad soo tabisay iyo su’aasha aad ka jawaabtay.
Ilaahay ha u naxaristo.
Aniga ayaa arintan aad isku waydiiyay.
Bal cid kalena soo raadi.Saxafi waa arin gaar ah.Laba jeer ayaa la qarxiyay.Labadii jeerba dadkii lahaa ayaa ku dhintay.
Wxaan uga socday ama uga danleehay in Bulshadu noqotay Bahalo u baahan in la karbaasho.
Deee Ina Adeertay inay Oday waydo maaha.Waa inaad aduu meherisaa,lol
Laakin mid Wacbuudhanba way helidoontaa kk
Sacadka iyo Caydhka haysla ilaaliso.
Beyle iyo mareye waa joogi jireen dadkana meysan caayi jirin ee waxa caayda keenay waa in la baraa kadibna geedkaas xididada loo sibaaaa.
Hawiye wuxuu noqoyay. Ma libaanihii lagu libaanay.